नेपाल एकीकरणको साक्षी कास्कीकोट किन ओझेलमा पारिदैछ (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
नेपाल एकीकरणको साक्षी कास्कीकोट किन ओझेलमा पारिदैछ (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Jun 22, 2019
१. नेपाल एकीकरणको साक्षी कास्कीकोट किन ओझेलमा पारिदैछ
कास्कीकोट नेपालको इतिहासको साक्षी हो । कास्की जिल्लाको नाम पनि यही स्थानको नामबाट रहन गएको विश्वास समेत गरिन्छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ मा रहेको यो स्थान नेपालको एकीकरणको उद्गम विन्दु मान्ने गरिन्छ ।
शाह वंशीय राजाहरुको पहिलो पुस्ता एक कुलमण्डल शाहले शाह उपाधि यही स्थानमा पाएको विश्वास गरिन्छ । आफैमा ऐतिहासिक यो स्थानको संरक्षणमा राज्य तथा पोखरा महानगरपालिकाले यथेष्ट ध्यान पु¥याएका छन् भने यहाँ रहेको गुप्तकालीका मन्दिर पनि कास्कीकोटको आकर्षणको अर्को पक्ष बनेको छ ।
नेपालकै पुरानो शक्तिपीठ मानिएको यो मन्दिरमा दर्शनार्थीको समेत व्यापक घुँइचो लाग्ने गरेको छ । ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण इतिहासको सम्मान पनि हो । तर यो स्थान भने प्रचार प्रसारको अभावमा अझै पनि बत्ति मुनिको अध्याँरो झै बनेको छ ।
२. न्यायिक समिति जस्ले विश्वास जित्दैछ पोखरा महानगरवासीहरुको
न्यायिक समिति स्थानीय तहका लागि प्रदान गरिएको सुन्दर नमुना र अभ्यास हो । स्थानीय स्तरमा हुने विवाद ,भैmझगडा , कलह र बिभिन्न मुद्दामा स्थानीय तह जति जानकार अन्य निकाय हुन्न पनि । त्यसमाथि अदालत पुगेर झञ्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु भन्दा पनि स्थानीय तहमा उपप्रमुखलाई न्यायधिकारी बनाएर जिम्मेवारी दिइएको न्यायिक समितिप्रति जनताको विश्वास पनि बढ्दो छ ।
धेरै मुद्दा र विवादहरु मिलापत्रमा नै मिल्न सक्ने हुन्छन र न्यायिक समितिको जोड पनि मिलापत्रमा नै रहने हुँदा धेरै मुद्दाहरु अदालत पुग्न छोडेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले पनि पोखरावासीको मन जित्दा धेरै मुद्दाहरु न्यायिक समितिबाट नै किनारा लाग्न थालेका छन् ।
३. पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १० पनि लम्कियो विकास र समृद्धिको मार्गमा
पोखराका प्रत्येक वडाहरु अहिले विकासको पक्षमा जागरुक र सक्रिय बनेको देख्न पाइन्छ । प्रतिष्पर्धात्मक शैलीमा पोखरा महानगरपालिका अन्र्तगतका वडाहरु विकासको काममा सक्रिय बन्न थालेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा शहरलाई एक दुई बर्ष भित्रै स्मार्ट बनाउने लक्ष्य लिएर अघि बढेपछि वडाहरुलाई पनि त्यही अनुरुप अगाडि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ ।
हरेक वडामा अहिले जनताको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने हरेक कार्यहरु नागरिक तथा सेवाग्राही मैत्री बनाइदैछ । यही मेसोमा वडा नम्बर १० ले पनि आफ्नो प्रयासलाई थप गति दिन थालेको छ ।